Izindaba - Izindlela zokwehlisa ukusetshenziswa kwezikhwama zepulasitiki
Phinda usebenzise izikhwama zepulasitiki: khetha izikhwama ezimbalwa eziqinile zepulasitiki uziphathe zizungeze esikhwameni sakho ukuze ukwazi ukuthenga ngezakho izikhwama esikhundleni sezinto ozihlinzekwe esitolo.
Izikhwama zepulasitiki ezingasetshenziswa kalula kulula (zingaba esikhwameni esincane noma ephaketheni!), Futhi inqobo nje uma uphatha ezinye ezimbalwa, ungathenga izinto eziningi, kepha futhi zingahlukaniswa, ngakho-ke ungalethi ukuphazamiseka empilweni. Izikhwama zepulasitiki ezingcolile zizosetshenziselwa udoti (noma zigezwe ziphinde zisetshenziswe), kuyilapho izikhwama zepulasitiki ezihlanzekile zingasetshenziswa kaningi.
Azikho izikhwama zepulasitiki: Ngokuvamile, abaphathi bemali bavame ukupakisha futhi baqoqe imali ngemishini. Babengenaso isikhathi sokubuza amakhasimende ukuthi bayawadinga yini amapulasitiki. Uma ungakwenzi, awudingi ukwamukela izikhwama zepulasitiki, njengokuthi uma uthenga izinto ezincane ezifana neyogathi, iziphuzo, imithi, njll. Ngubani othi izikhwama zesikole nezikhwama ezikwazi ukufaka izikhwama azikwazi ukuba izikhwama zokuthenga? Sebenzisa izikhwama ezingasebenziseka: phatha esakho isikhwama ngaso sonke isikhathi.
Bala Zingaki izikhwama zepulasitiki ozisebenzisile: HLOLA! Cabanga ukuthi zingaki izikhwama zepulasitiki ozisebenzisayo namuhla noma kuleli sonto. Tshela lezi zindlela kubangani bakho nezihlobo, ukuze abantu abaningi benze umnikelo emvelweni.
Uma uthenga izinto ezintekenteke njengamaqanda, khetha ubhasikidi omncane owenziwe ngomnyezane, onobungane futhi onesitayela. Thenga ezikhwameni ezingasebenziseka lapho kungenzeka. Kukhona nezikhwama zikadoti ezibomvu, eziphuzi, eziluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza. Imisebenzi yalezi zikhwama emakethe isetshenziselwa ukuhlunga udoti.
Ukuhlunga imfucumfucu kubaluleke kakhulu futhi kuvumelana nokusetshenziswa kukadoti ongaphinde usetshenziswe, imfucuza yasendlini ivame ukuhlukaniswa ibe yimfucuza yasekhaya nemfucuza evuselelekayo, uma kuyingozi ngengilazi kagesi kagesi ngakho-ke singasebenzisa isikhwama semfucumfucu esibomvu, masibambe iqhaza umhlaba.
U Bolts, Ama-Lag Bolts, Kuqondile Ukhonkolo Pipe Machine, Isakhiwo Bolts, Izinqola Zokuhamba, I-Hex Bolts,